Amahlabezulu agane unwabu ngodaba lweNduna uKhayisa Ndiweni – Southern Express
Amahlabezulu agane unwabu ngodaba lweNduna uKhayisa Ndiweni
Amahlabezulu athukuthele agane unwabu ngodaba lokuhlukunyezwa kwenduna yeNhlambabaloyi uNhlanhlayamangwe Ndiweni. Kubikwa ukuthi induna yahlaselwa ngabantu ababezama ukumphuca izikhiye zemoto yakhe bethi bavela ehovisi lika mongameli. Lokho kwenza induna yanquma ukuyithungela ngomlilo imoto ,lenhlekelele yenza umphakathi owawuseduze usondele ukuzovikela induna.
Iphephandaba iSouthern Express likhulume nabaholi bezinhlangano ezehlukene mayelana naloludaba. UDiscent Bhajila owophiko lwentsha ebandleni eliphikisayo iMDC ongomunye wabakade bebhikisha uthe kuyinhlamba edlulisa amalawulo uma abasekeli bamabandla ezombusazwe behlanganyela nezisebenzi zikahulumeni ukuhlukumeza abaholi bendabuko ngoba lento iveza obala ukuthi kweyiswa amasiko nendabuko yesizwe esimnyama.
“Ukuhlukunyezwa kwabantu abangavumelani lezenzo zombuso okhona kubi kakhulu, uzulu kumele avunyelwe ukuphawula imibono yakhe ngaphandle kokwesatshiswa” kuqhuba uBhajila
Inhlangano elondoloza amasiko Ibutho LeNqama kusitathimende sayo ithe ikhathazeke kakhulu ngokwehlela induna ngoba bona beyinhlangano bagqugquzela ukuhlonishwa kwezinduna pho ke uhulumeni waseZimbabwe akakwenzi lokho. Iphephandaba leSouthern Express lixhumane nosomlomo weButho LeNqama uSidumo Sikhosana ogcizelele ngokuthi akaliboni iphutha elenziwe yinduna uKhayisa ngokuzama ukuvikela iNtabazinduna okuyintaba equkethe umlandu wesizwe.
“Uhulumeni kufanele akwazi ukuthi induna imele isizwe njengomholi waso, ingakho kufanele ivikele yonke into engaphansi kwayo” kugcizelela uSikhosana
Inhlangano yezinduna ebheke udaba lobukhosi iRoyal Crown Council nayo iphefumule ngaloludaba yazwakalisa ukungenami. Okhulumela lenhlangano uMnumzane Effie Ncube uthe ukuhlaselwa kukaMdladla kuyinto engamukelekile neze ngoba kuyikuhlaselwa kwamahlabezulu wonke jikelele namakhosi okumele ngabe akhuselwa nguhulumeni.
“Sekwaba yinsalavukela ukuthi izisebenzi zombuso zihlukumeze umphakathi, esikhundleni sokuvikela uzulu sebesetshenziswa ukucikela phansi umthethosisekelo. Ukuphepha kwabantu nokwabaholi bendabuko kusezandleni zikahulumeni kungakhathalekile ukuthi imibono yabo iyahambisana nekahulumeni” kuchaza uNcube
Iqembu lepolitiki iZAPU nayo ikwazile ukukhipha isitathimende ihlaba ihlikiza uhulumeni ngaso lesi siga senduna yeNhlambabaloyi. Okhankasela isikhundla sokuba ngumongameli walenhlangano uFuture Msebele uthe kuyadabukisa ukuthi namanje uhulumeni kusamehlula ukuthi ehlise amandla eze kubantu ezabelweni. Uhulumeni kumele axhumane nabahlali kanye nobuholi bendabuko ngaphambilini kokuthi aphisane ngomhlaba.
“Ngokusho kwenduna uNdiweni umhlaba akhala ngawo ngumhlaba lapho okunentaba eyinkaba yesizwe, lentaba inokuningi okuthinta isizwe, ngakho kumele ivikelwe, sidangele kakhulu ngendlela ukulumeni ophathe ngakhona induna yethu” kuphetha uMsebele
UMehluli Moyo ongusihlalo weJoshua Nkomo Cultural Movement uthe udlame alungenziwa kubantu nakubaholi.
“Uma induna ibeka owayo umbono lowo okanye labo abangahambisani nayo abasebenzise ingxoxo mpikiswano hayi udlame”
Ongunobhala jikelele wenhlangano yamakomanisi eZimbabwe uNgqabutho Mabhena uthe basisola kakhulu isenzo samalungu eZanu Pf sokuhlasela induna.
‘Singabe singaboni ngaso linye nenduna kodwa siyanxusa ukuthi iZANU PF ayingabahlukumezi abanembono ehlukene neyabo, nalabo abasolayo indlela izinto okwenzeka ngayo. Kumele sibonele kubantu baseMzansi ukuthi abantu bayakwazi ukusebenzisana ize bephuma kunhlangano ezehlukene” kusho uMabhena ophinde abengumholi wezizalwane zase Zimbabwe ezizinze eGoli.
USomlandu odumile uArnold Mayibongwe Nkala naye uzwakalise ukungajabuli ngokwehlele induna ethi lesisiga siyamangaza kakhululu ngoba kukhona izindlela ezisemthethweni njalo eziphucukileyo kakhulu ezingasetshenziswa lapho abantu bengaboni ngaso linye hayi ukusebenzisa ubunswelaboya.
“Induna kumele ihlonishwe ngoba izwi layo limele umphakathi ngoba ingumholi wendabuko ongavotelwayo
Ibandla le MRP lithembise ukuthi ukuphepha kwenduna sekusezandleni zabo. Bathembise ukuthi uphiko lwabo lwezobunhloli lolwezokuphepha yilo oselubheke ukuphepha kwenduna ngoba amapoyisa bengawethembi.
uMbonisi Gumbo echaza kukhasi lakhe leFacebook uthe uMongameli weMRP ufonelwa ngapha nangapha abantu bekhathazekile ngokuphepha kwenduna. Imizamo yokuxhumana nomongameli we MRP yehlule ngemva kokuba intatheli yaleliphepha ithumele imibuzo yangathola impendulo
THE FIRST NDEBELE-BOER WAR (PART 2)